များစွာသောစက်မှုထုတ်ကုန်များတွင်ထုတ်ကုန်များ၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္forာန်လိုအပ်ချက်သည်မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်သုံးထုတ်ကုန်များ၏မှိုဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည်စက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောမှိုဒီဇိုင်းအတွက်ပလပ်စတစ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် proc အတွက် ...
နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များမှိုထုတ်လုပ်မှုသည်ဆေးထိုးမှိုစက်ရုံမှ ထွက်၍ မရပါ။ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များမှိုနည်းပညာသည် ပို၍ တိုးတက်လာသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်နေ့စဉ်လိုအပ်သောမှို၏အသုံးအပေါဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သောအဓိကမှိုကျမှုလိုအပ်သည်။ ။ ငါ ...
အဘယ်အရာကိုအစီအမံ Crate မှို၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေနိုင်သည်အဘယ်သို့
အရည်အချင်းပြည့်သောသေတ္တာထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးရှိသော Crate မှိုများကိုပေးရပါမည်။ ဒီတော့အဘယ်အစီအမံသေတ္တာများ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်? ကုန်သေတ္တာမှိုထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ပါ၊
အဆိုပါ Dustbin မှို၏ပုံပျက်သောအတူကိုင်တွယ်နည်း
အဓိကအားဖြင့်မူလတည်ဆောက်ပုံ၊ သံမဏိ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံသဏ္andာန်နှင့်အပိုင်း၏အသွင်အပြင်ရှုထောင့်နှင့်အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော Dustbin မှို၏ပုံပျက်သောနှင့်ကွဲအက်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ အက်ကြောင်းများသည်များသောအားဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သော်လည်းအပူပေးသည်။
အရာအားလုံးမှာဘဝတစ်ခုစီရှိတယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းအမှန်ကိုသိသင့်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါများသည်အိမ်သုံးပစ္စည်းမှိုများအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာအိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်မှို wear curve ကိုပထမအကြိမ်ပြုပြင်ခြင်းသည် ... တစ်ခုချင်းစီတွင်ရှိသည်။
Daily Necessities Mold ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည်အကောင်းဆုံးမှိုဒီဇိုင်း၊ တိကျမှုမြင့်မားသော၊ အရည်အသွေးမြင့်သောအပူကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သင့်လျော်သောပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ မှိုများနှင့်အခြားအချက်များအပြင်အပြင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဒီကနေ့ ...
Long Life နှင့်အတူသေတ္တာမှိုလုပ်နည်း
ပထမ ဦး စွာကောင်းသောသေတ္တာမှိုဒီဇိုင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ။ အရည်အချင်းရှိသောသေတ္တာမှိုသည်စီမံကိန်းမစတင်မီတွင်ပြီးပြည့်စုံသောမှိုဖွဲ့စည်းပုံရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် Heya သည်ပုံသဏ္structureာန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပုံသဏ္designာန်ဒီဇိုင်းတို့ကိုအချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့ပြီး၎င်းအားဖြိုဖျက်ခြင်းထောင့်၊ ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင် microcosm၊ တံခါးစနစ်ဒီဇိုင်း၊
နံရိုးနှင့် Gussets များ၏အနေအထားသည်ပရိဘောဂ၏သေတ္တာမှိုပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်
နံရိုးနှင့် Gussets တည်ဆောက်ရာတွင်အချိုးကျအထူစံသတ်မှတ်ချက်များကိုလေ့လာသင့်သည်။ နံရိုး (သို့) စူးစူးဝါးများကပျက်ကွက်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းနံရံများ၊ နစ်မြုပ်ခြင်း၊ ဖောင်းပွခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်းလိုင်းများ (အားလုံးသည်ဖိအားများပြားစွာရရှိခြင်း) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြာရှည်သောသံသရာအချိန်ကာလများကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒီနေရာကို ...
အဘယ်ကြောင့် Cooling Table မှိုအတွက်အရေးကြီးသနည်း
အအေးပေးစနစ်၏ဒီဇိုင်းသည်ဆေးထိုးခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်၏ပုံသွင်းခြင်းကိုတင်းကျပ်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာအအေးခံပြီးပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်ကိုပြင်ပအင်အားကြောင့်ပုံပျက်သောအနေဖြင့်ရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ အအေးမိကတည်းက ...
ယနေ့တွင်ပလတ်စတစ်ပရိဘောဂများအသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ ပလတ်စတစ်ပရိဘောဂများသည်စျေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ပလတ်စတစ်ပရိဘောဂများသည်ပေါ့ပါး။ အကြမ်းခံ။ ရေစိုခံသည်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်၊ စျေးသိပ်မကြီးသော၊ ရသနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ပြီး၊ အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာမာစတာစည်းဝေးပွဲကိုပုံဆွဲခြင်းမပြုမီ, မှိုမြေပုံဆွဲ, ဖြစ်စဉ်ကိုပုံဆွဲခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆွဲခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရပါမည်။ လာမည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်အာမခံထားအရွယ်အစားပုံဆွဲအပေါ် "process ကိုအရွယ်အစား" ဟူသောစကားလုံးများနှင့်အတူမှတ်သားခံရကြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ...
လိုင်း positioning ကိုအအေး
အအေးလိုင်းများ၏တည်နေရာသည်အစိတ်အပိုင်း၏ထိရောက်သောအအေးခံခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ခြင်းအတွက်အရေးပါသည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 5. 16 အအေးလိုင်းများတစ်ခုအကောင်းဆုံး layout ကိုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များဖော်ပြသည်။ သတိရရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာအအေးခံသည့်အချင်းသည် reasonab ရှိရန်လုံလောက်သောပမာဏဖြစ်သင့်သည်။